Antenimieram-pirenena: Mandray ny toerany ireo depiote roa nasolo ireo depiote voatendry ho minisitra
mardi, 13 août 2019 20:48
Hita fototra ny fahabangan-toerana eo anivon’ny Antenimieram-pirenena taorian’ny fanendrena an’ny depiote isany Naharimamy Lucien Irmah sy Volahaingo Marie Thérèse ho mpikambana ao amin’ny governemanta Ntsay Christian.
Araka ny didy laharana 48-HCC/AR navoakan’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny 13 aogositra 2019 dia i Famindra Justin, izay faharoa tao amin’ny lisitra « Isika Rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina » tao Toamasina I, no solombavambahoakan’i Toamasina I eo anivon’ny Antenimieram-pirenana, misolo toerana an’i Naharimamy Lucien Irmah izay voatendry ho minisitry ny mponina sy ny fampiroboroboana ny vehivavy.
Ravenasy Jean Emanielson, mpisolotoerana amin’ny lisitra « Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina » tao Bealanana, manomboka izao no solombavambahoakan’i Bealanana eo anivon’ny Antenimieram-pirenana, misolo toeana an’i Volahaingo Marie Thérèse, ity farany izay voatendry ho minisitry ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika sy arak’asa.
Nampahafantarina teo anoloan’ireo namany, ary efa nandray ny toerany avy ireto solombavambahoaka roa voavao ireto androany.
Mihena ho 22 ny isan’ny vehivavy solombavambahoaka ao Tsimbazaza, miampy kosa ny isan’ny lehilahy solombavambahoaka taorian’ny nanendrena azy roa vavy ho minisitra, ka nanendrena azy roalahy ho depiote solon’izy ireo.